Induction Brazing Coils Kuburitsa Mutengo uye Mutengesi muChina
musha / Induction Kuchenesa Makumbo / Induction Brazing Makorari
Category: Induction Kuchenesa Makumbo Tags: induction brazing coils, induction coil, induction coil dhizaini, induction coils, induction heat coil design, induction inonyungudika coil, inductor
Hazvina mhosva kuti chimiro chei, mashizha, kana chimiro induction coil unoda, tinogona kukubatsira! Heano angori mashoma emazana emakoil dhizaini atakashanda nawo. Pancake coils, helical coils, concentrator coils… mativi, kutenderera uye rectangular Tubing… Kamwe-dzoka, mashanu-dzoka, gumi-kutendeuka… pasi 0.10 5 ID kusvika pamusoro XNUMX "ID… yekunze kana kwekunze kupisa. Chero zvipi zvaunoda, titumire mifananidzo yako uye zvakatemwa zvekukurumidza chitaurwa. Kana iwe uri mutsva kune induction kudziyisa, titumire isu zvikamu zvako zvemahara ongororo Iyo ndiyo induction coil inorumbidzwa neyakakodzera chishandiso iyo kazhinji kazhinji inoraira kubudirira kana kutadza kwesisitimu yese.
Yakarongedzwa kubva inonyanya kuchenesa mhangura tubing kana ndiro, iyo induction heat coils design inokurudzirwa nemashandisirwo, kusarudzwa kwehurefu, simba density uye nguva yekupisa. Chinangwa chemukati coil ndechekugadzira iyo magnetic flux pateni kuti ibudise nzira iripo muchikamu chebasa kuti sarudza kupisa nzvimbo yeungano kuti brazari.
The Induction coil inofanira kunge yakanyatsogadzwa paungano ichibvumira kupisa kunoda kuitwa. Kupera kwemhepo kana kubatanidza nzvimbo pakati pebasa rebasa uye mukati memirairi inofanira kuderedzwa nokuda kwezvikonzero zvekushanda. Zviratidzo zvekugadzirisa zvikamu zve 0.125 inch (3.175 mm) kusvika ku 0.250 inch (6.350 mm) zvinonzwisisika pakusungurudza nekiil helical.
Zvikamu zvisina kufanana zvakafanana zvinogona kuwedzerwa zvimwe zvikwata zvinoda humwe simba rekukunda kukundikana kwekubatanidza kushanda. Izvi zviitiko zvinosanganisira mamiriro ezvinhu umo hovha yakaipoteredza ine gomba guru remhepo kana coil isina kukomberedza inofanirwa kuti uwane rusvingo.
Nzvimbo iyo inopisa inogadzirisa urefu hwekunyorwa kwekipi. An induction coil iyo inopfupika inoda nguva yakareba inopisa nguva yekubvumira kupisa, nekuitisa, kuvhara nzvimbo yacho. An induction heat coil iyo yakareba kwazvo inopisa simbi yakawanda kudarika zvakakosha, uye naizvozvo iite zvishoma. HLQ Induction Heating Machine Co ine zvakawanda zvakagadziriswa zve inductors zvekushisa kunzvimbo, uye mapira anopisa zvakanaka pasina akapoteredza chikamu chebasa.
Yakasungirirwa kubva kune yakakura yebhandi yebhandi kana yeplate, iyo induction coil yakagadzirirwa inoshandiswa nekushanda, kusarudzwa kwemajaira, simba rekuda uye nguva yekupisa. Chinangwa chekunyora coil ndechokugadzira magnetic flux pattern kuti ipe nzira yezvino iri muchigadzirwa chebasa kuti isarudze nzvimbo yeungano kuti ive yakashongedzwa.
Iyo induction coil inofanira kuve yakarongedzwa mushe paungano ichibvumira iyo inodikanwa yekushisa kuti iitwe Iwoge yemhepo kana nzvimbo yekubatanidza pakati pechinhu chebasa uye mukati meiyo coil inofanira kuderedzwa nekuda kwezvikonzero zvekubudirira. Typical dhizaini mapipi e0.125 inch (3.175 mm) kusvika 0.250 inch (6.350 mm) zvine musoro kuti utarise uine helical coil.
Iyo nharaunda inofanirwa kupiswa inosarudza kureba kweiyo induction coil. Iyo induction coil iyo iri pfupi zvikuru inoda nguva yakareba yekudziya kuti ubvumire kupisa, nekugadzirwa, kuvhara nzvimbo. Iyo induction coil iyo yakapamhama yakanyanya kupisa simbi pane kudikanwa, uye saka ive isingashande. HLQ induction heat Co ine akawanda akakosha magadzirirwo e induction coil yekudziya localized, uye marasha anopisa zvakanaka pasina kutenderedza chikamu chebasa.
induction heat coils design